တောဆက်ရက် - ဝီကီပီးဒီးယား
A. f. fuscus
A. f. fuscus (Wagler, 1827)
A. f. fumidus Ripley, 1950
A. f. mahrattensis (Sykes, 1832)
A. f. torquatus Davison, 1892
Maina cristelloides Hodgson, 1836
Acridotheres cristatelloides Cabanis, 1850
တောဆက်ရက် (Acridotheres fuscus) သည် မျိုးစဉ်‘ပက်စာရီ‌ဖောမီး’မျိုးရင်း ‘စတာ နီဒီး’တွင် ပါဝင်သည်။ သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အမည်အားဖြင့် ‘အက်ကရီဒိုသီးရီး ဖပ်စကပ်’ဟု‌ခေါ်သည်။ အလျား ၉ လက်မရှိသည်။ ခပ်လှမ်း လှမ်းမှကြည့်လျှင် ဆက်ရက်နှင့် ခွဲခြား၍မရအောင်တူသည်။ သို့‌သော် ဆက်ရက်နှင့် ကွာခြား ချက်များကားရှိ၏။ ဆက်ရက်ထက် အ‌မွေးအ‌တောင် ညိုမှိုင်းသည်။ နှာ‌ပေါက်အထက်နားတွင် အ‌မွှေးများ‌ထောင်‌နေသည်။ ဆက်ရက်မှာကဲ့သို့ နှုတ်သီး‌အောက်ဘက်တွင် တွဲကျ‌နေ‌သော အဝါ‌ရောင်အ‌ရေပြား မရှိ‌ပေ။ ပျံသန်း‌နေစဉ် အ‌တောင်ရှိအဖြူ ကွက်များနှင့် အမြီးစွန်းရှိ အဖြူ‌ရောင်ကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်သည်။ သွင်ပြင်မူရာနှင့် ပျံသန်းပုံမှာ ဆက်ရက်နှင့်တူ၏။ သို့‌သော် ဆက်ရက်‌လောက် အတင့်မရဲသည့်ပြင် ဆက်ရက်ကဲ့သို့ ညစ်ညမ်းသည့်အစာကို မစား‌ချေ။ ‌တောဆက်ရက်ဟု အမည်တွင် ‌သော်လည်း တောနက်တွင် ကျက်စား‌သောငှက်မျိုး မဟုတ်‌ပေ။ ဥယျာဉ်၊ တောစပ်တို့တွင် ကျက်စား‌လေ့ရှိသည်။ လယ်‌တောတွင် ကျွဲနွားတို့၏ ဦး‌ခေါင်းထက်၌ နား‌နေသည်ကို မကြာခဏ တွေ့ရသည်။ ‌ရေကန်နံ‌ဘေးရှိ ကိုင်း‌တောများနှင့် ‌ညောင်ပင်၊ လက်ပံပင်များ‌ပေါ်တွင်နား၍ အသီးအပွင့်များကို စား‌သောက်လေ့ရှိသည်။ သား‌ပေါက်ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့အနီးအနားတွင် တွေ့ရတတ်သည်။
ချင်းတွင်းမြစ်တစ်‌လျှောက် ကင်းတပ်အထက်တွင် သဲထူထပ် သောကမ်း‌ခြေနှင့် ‌တောင်ကမ်းပါး၌ ‌တောဆက်ရက်များကို ဆက်ရက်လည်နက်၊ ပုစဉ်းထိုးငှက်နှင့်အတူ ‌ရော‌နှော၍ ‌တွေ့ရသည်။ ‌တောဆက်ရက် များသည်အများအားဖြင့် သစ်ပင်အ‌ခေါင်းများတွင် သား‌ပေါက်ကြသည်။ မြစ်ကြီးနားတွင် နှစ်စဉ် ဖေ‌ဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက် ‌နေ့‌လောက်မှစ၍ ‌ပေါက်သည်ဟုဆိုသည်။ ‌တောဆက်ရက်ကို ကမ္ဘာ့အ‌ရှေ့ပိုင်း နိုင်ငံများတွင် အနှံ့အပြား ‌တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကွင်းပြင်များ၌၎င်း၊ ရှမ်းကုန်း‌မြေမြင့်၌၎င်း အများအားဖြင့်‌တွေ့ရသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ ယင်းငှက်ကို မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအဖြစ် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
↑ BirdLife International (2012). "Acridotheres fuscus". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
↑ Wagler, Johann Georg (1827)။ Systema Avium. Pars I။ pars 1။ sumtibus J.G. Cottae။ p. 88။
↑ Hodgson, B.H. (1836). "Additions to the ornithology of Nepal". Journal of the Asiatic Society 5: 770–781.
↑ Sharpe, R. Bowdler (1890)။ Catalogue of the Birds in the British Museum။ 13။ London: British Museum (Natural History)။ pp. 86–90။
↑ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် မျိုးဆက်ပျက်သုဉ်းမည့်အန္တရာယ်ရှိသဖြင့် ကာကွယ်ထားသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ (PDF)။ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၉၀/၂၀၂၀၊ (၁၈-၂-၂၀၂၁)။ 18 February 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောဆက်ရက်&oldid=718462" မှ ရယူရန်
တောင်အာရှတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် တွေ့ရှိရသော ငှက်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။